> Resource > Ladnaansho > Sidee inuu ka soo kabsado Photos ka Canon EOS Mucaaradka T3i
Waxaan soo kaban karto, Photos tirtiray ka Canon EOS Mucaaradka T3i?
Editor Qaaliga ah, waxaan uu dhib ka haysto aan Canon EOS Mucaaradka T3i. Waxaan ku kaydsan sawirada booqashadaydii Africa ku yaal. Shalay waxaan si qalad ah u formatted aan ka saareen sawirrada ah oo dhan si aan computer. Hadda sawirada ayaa dhamaantood ka baxeen. Ma jiraa wax aan u hanato kartaa sawiro aan?
Sawirro ku saabsan Canon EOS Mucaaradka T3I lagu lumin karaa sababo kala duwan, sida ula kac ah ama shil tirtirka, formatting kaadhka xusuusta ama xataa dhibaato nidaamka. Ha welwelina, fursadaha soo kabsaday sawiro ka Canon EOS Mucaaradka T3i waa ku weyn yahay. Sawirrada lumay weli ku jira kaadhka xusuusta aad Canon EOS Mucaaradka T3i ka hor xogta cusub iyaga overwrites. Sidaas oo kaliya aad u baahan tahay in aad joojiso qaadashada camera digital oo raadinaya barnaamijka sawir Canon EOS Mucaaradka T3i ah si ay kuu caawiyaan.
Wondershare Photo Recovery ama Wondershare Photo Recovery for Mac waa barnaamij ah in aad u baahan tahay in ay dib u soo ceshano sawiro ka Canon EOS Mucaaradka T3i. Qalabkani waxa uu awood kuu siinayaa inuu ka soo kabsado photos tirtiray oo laga Canon EOS Mucaaradka T3i in a clicks.It yar oo sahlan waa awoodaa inuu ka soo kabsado videos iyo files audio ka camera Canon EOE Mucaaradka T3i aad.
Waxaad kartaa hoos ku soo bixi version maxkamad barnaamijka a.
Kabsado Photos ka Canon EOS Mucaaradka T3i in 3 Talaabooyinka
Aan u qabtaan soo kabashada sawir Canon EOS Mucaaradka T3i la Wondershare Photo Recovery for Windows. Users Mac fadlan version Mac uu u sameeyo dib u soo kabashada.
Tallaabada 1 Run Wondershare Photo Recovery on your computer, kaliya aad u baahan tahay inaad guji "Start" button uu furmo suuqa hoose si ay u bilaabaan.
Tallaabada 2 Hadda waxaad u baahan tahay oo kaliya in ay doortaan warqad drive ee kaadhka xusuusta aad Canon EOS Mucaaradka T3i ah oo guji "Scan" si ay u eegaan sawirada lumay.
Waxaad astaysto qaabab file aad rabto in aad soo kabsado adigoo gujinaya "Xulashada Filter" furmo.
Fiiro gaar ah: Fadlan xiriiriyaan Canon EOS Mucaaradka T3i ama kaadhka xusuusta ay la your computer iyo in la xaqiijiyo waxa laga garan karaa sida drive adag on your computer.
Tallaabada 3 Markii scan la sameeyo, waxaad dib u soo ceshano kartaa sawiro laga soo Canon EOS Mucaaradka T3i hadda.
Sawirrada recoverable doonaa oo dhan lagu qori suuqa kala barnaamijka. Waxaad iyaga ku eegaan karo in lagu hubiyo sida badan oo sawiro lumay la soo kabsaday karo. Markaas waxaad dooran kartaa sawirada aad doonaysid in aad dib u soo ceshano oo guji "Ladnaansho" badhanka si ay u badbaadin on your computer.
Siduu u Canon CRW Photo Recovery
Top 10 Audio taariikhqorihii u Mac OS X EI Capitan